सडक कालोपत्र ३ वर्षदेखि अलपत्र | गृहपृष्ठ
Home प्रदेश समाचार सडक कालोपत्र ३ वर्षदेखि अलपत्र
on: १९ बैशाख २०७५, बुधबार ०७:४४ प्रदेश समाचार
सडक कालोपत्र ३ वर्षदेखि अलपत्र
पर्वत । पोखरा–जोमसोम सडकको विकल्प सडकको रूपमा निर्माण गर्न थालिएको सडक शिलान्यास भएको ३ वर्षसम्म पनि कालोपत्र हुन सकेको छैन । पर्वतको कुश्मा नगरपालिका–२ घुम्तीदेखि खुर्कोट जोड्ने सडकको काम शिलान्यास भएको ३ वर्षसम्म पनि अगाडि बढ्न नसकेको हो ।
सडक कालोपत्र गर्ने कार्यको शिलान्यास पूर्वसांसद अर्जुनप्रसाद जोशीले २०७२ फागुनमा गरेका थिए । दुई लेनको सडकको १२ मिटर कालोपत्रे, ३/३ मिटर सेड–ब्याक, दुईतर्फी नाली, कुश्मा २ खुर्कोटको रिठेखोलामा पक्की पुल र अन्य ससाना खोल्सामा कल्भर्ट राख्ने योजना थियो । बहुवर्षे ठेक्का स्वीकृत भएको उक्त योजनालाई बागलुङको सडक डिभिजन कार्यालयले ठेक्का पनि लगायो । तर, तत्कालीन ठेकेदार डीबी तामाङले थोरै काम थालेर छाडे र त्यसपछि हालसम्म योजनामा कुनै प्रगति हुन सकेको छैन ।
उक्त सडकका लागि योजनाअनुसार बहुवर्षे ठेक्का स्वीकृत गराएर २०७२ मै ११ करोड बजेट विनियोजन भएको दाबी पूर्वसांसद अर्जुनप्रसाद जोशीको छ । ‘२२ किलोमिटर कालोपत्र गर्न रू. ५९ करोडको इष्टिमेट थियो । ११ करोड बजेट छुट्टिएपछि काम पनि शुरू भएको थियो ।’ गतवर्ष उक्त सडकका लागि रू. ४८ करोड स्वीकृत भएको जोशीले बताए । कसले बदमासी गरेको हो, त्यसको खोजी गर्ने उनको भनाइ छ ।
बीचको सडक अलपत्रै छ, तर यही सडकको छेउखण्डमा पक्की पुल बनिरहेको छ । रिठ्ठेखोलामा बन्दै गरेको पुलको काम असारभित्रै सकिँदै छ । स्थानीय व्यवसायी राजु शर्माले ठेक्का पाएको पुलको काम ८० प्रतिशत सकिएको छ । साढे ३ करोडको लागतमा पुल बनेर सकिने सम्झौता छ ।
सडक डिभिजन कार्यालय बागलुङका अनुसार क्षेत्रीय सडकको सूचीमा बहुवर्षे ठेक्काभित्र परेको यो सडकका लागि चालू वर्ष बजेट नै छैन । बजेट नै नभएपछि सडकको काम अघि बढ्ने कि नबढ्ने निश्चित नभएको डिभिजन प्रमुख थानेश्वर खत्रीले बताए ।